1 TESALỌNAIKA 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TE 4)
Ụmụnna anyị, unu nile amatala otu unu ga-esi bie ndụ na-atọ Chineke ụtọ, nꞌihi na unu amatala iwu ahụ si nꞌaka Onyenwe anyị Jisọs nke anyị nyere unu.
Ugbu a anyị na-arịọ unu, nꞌezie, anyị ji aha Onyenwe anyị Jisọs na-arịọ unu sị unu biko, na-aganụ nꞌihu ibi ụdị ndụ ahụ na-adị Chineke mma.
Ọ bụghị nꞌụzọ imejupụta ọchịchọ ọjọọ nke anụ ahụ dị ka ndị na-amaghị Chineke na-eme, nꞌihi enweghị nghọta ha banyere ihe bụ ụzọ Chineke chọrọ ka ha gbasoo.
Chineke achọkwaghị ka unu megbuo ibe unu site na nwoke iduru nwụnye onye ọzọ ka ha abụọ dinakọọ. Nꞌihi na Chineke ga-ata onye na-eme ihe dị otu a ahụhụ, dị ka anyị gwara unu na mbụ.
Ma nꞌezie, ọ pụtala ìhè na unu hụrụ ụmụ Chineke nile nọ nꞌobodo unu nꞌanya. Ma anyị na-arịọsikwa unu arịrịọ ike sị unu na-ahụkwa ha nꞌanya karịa ka unu hụrụ ha ugbu a.
Otu ọ di ụmụnna anyị, achọrọ m ka unu mata ihe bụ ọnọdụ ụmụ Chineke, mgbe ha dara nꞌụra ọnwụ. Mgbe unu maara nke a unu agaghị abụ ndị na-anọ na mwute, ma ọ bụ unu adịrị dị ka ndị na-enweghị olileanya mgbe mmadụ nwụrụ nꞌetiti unu.
Nꞌihi na ebe ọ bụ na anyị kweere na Jisọs nwụrụ ma sitekwa nꞌọnwụ bilie ọzọ, anyị nwekwara ike inwe okwukwe na mgbe Jisọs ga-abịa ọzọ, Chineke ga-eme ka ndị Kraịst nile nwụrụ anwụ soro Jisọs lọghachi na ndụ.
Nꞌihi na, ihe m na-agwa unu ugbu a si nꞌọnụ Onyenwe anyị nꞌonwe ya. Anyị bụ ndị dị ndụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọta, agaghị eburu ndị dara nꞌụra ọnwụ ụzọ bilite.
Mgbe ahụ, anyị onwe anyị, ndị dị ndụ, ndị fọdụrụ nꞌụwa, ka a ga-eweli elu nꞌime igwe ojii, ịga izute Onyenwe anyị na mbara eluigwe, ebe anyị na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi.